အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် 2018 NAB ပြရန်သတင်း - ကို Creative & ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Directory ကို။ NAB ပြရန်, NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်၏ထုတ်လုပ်သူ၏တာဝန်ရှိသူတဦးကထုတ်လွှင့်
#NABShow မှာနယူး Podcasts Pavilion
နိုင်ငံတကာရုပ်သံလိုင်း Club တီဗီ RosTelecom ထုတ်လွှင့်နှင့်၎င်း၏ကလပ်တီဗီရုရှားကမူပြောင်းခြင်းများအတွက်အပြည့်အဝ HD မှာအပြန်အလှန်တီဗီအကြောင်းအရာပေါင်းစည်းဖို့ PBT အီးယူကိုရှေးခယျြ
FOR-တစ်ဦးက NAB 12 မှာနယူး 4G-SDI 2018K က Universal System ကို Frame ကမိတ်ဆက်ဖို့
#AvidConnect ကို Preview: @Avid မှစ. Keli Callaghan
ROTOLIGHT Neo2လောဘတီထွင်ဆန်းသစ်မှု Award ကိုအနိုင်ပေး
NOW ကအပြည့်အဝ AWS ပံ့ပိုး ANEVIA NEA-CDN 4.4 UPDATE
စီးပွားရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးမန်နေဂျာအဖြစ် axon ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒီဇိုင်းရက်ချိန်း Andreas Wuth-Rausch
FLUOTEC ဟာ Professional က STUDIO & Production အလင်းစျေးကွက်အတွက်ကယ်လီဖိုးနီးယားရုံးအစီအစဉ်စတင်ခဲ့သော
VITEC'S MGW Ace ကိုကာကွယ်ရေးရဲ့ JITC လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာနမှလက်ခံဖို့အတွက်ပထမဦးစွာ HEVC encoding ဖြစ်ပါတယ်
ဧည့်သည်-One, ဧည့်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လေယာဉ်အမှုထမ်းအသိအမှတ်ပြုအတွက်ကျွမ်းကျင်သူအတွက် Riedel ရယူအစုရှယ်ယာ
အဆိုပါ 2018 NAB Show မှာဗီဒီယိုကရှင်းလင်းမှု
Maxwell Kopsho သင်တန်း၏ဒါရိုက်တာအဖြစ်အလယျပိုငျးအတ္တလန္တိတ်ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
NAB2018 မှာဗီဒီယို Ghostdx ၏ Launch ဖြင့် BHV အသံလွှင့် Revolutionizes ပါဝါနဲ့ဒေတာဆက်သွယ်မှု
2018 NAB မှ Enhanced ECI Automation Interface ကိုယူခဲ့ဖို့ Shotoku ယူအက်စ်အေ
Piksel မီဒီယာသစ် & Entertainment ကခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့ကြေညာ
Wisycom ရောနှော Henri Rapp အသံမှတာရှည်ခံကြိုးမဲ့ Solutions များရရှိစေ
Telestream Introduces ကမ္ဘာ့ပထမဦးစွာပေါင်းစည်းပိတ်ထားသောစာတန်း Inserter & Multiscreen တိုက်ရိုက်လွှဖြေရှင်းချက်
ထုတ်လုပ်မှု, ပြသမှုနှင့်လွှများအတွက်မူထူးခြားတဲ့ရိုးရှင်းသောဖြေရှင်းနည်းတစ်ခု NAB 2018 လိုင်း-Up နှင့်အတူပုံစံလုပ်ရန် '' ကွဲပြားခြားနားသော '' RUSHWORKS
Bluefish444 လာမည့် IP ကိုလွှ Software များ, IngeSTream ကြေညာ
အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် 2018 NAB ပြရန်သတင်းများ။ NAB ပြရန်, NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် NAB ပြရန်သတင်းထုတ်လုပ်သူ၏တာဝန်ရှိသူတဦးကထုတ်လွှင့်: အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာ, တီဗီ & ရေဒီယိုနည်းပညာနှင့် Post ကိုထုတ်လုပ်မှုသတင်းများ။ NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်၏ထုတ်လုပ်သူ
Home » ကို Creative & ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Directory ကို
ကို Creative & ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Directory ကို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ directory ထဲတွင်စာရင်းသွင်းကုမ္ပဏီများဖန်တီးမှုသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းများကိုနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းစည်းဝေးကြီးများနှင့်ပြပွဲသို့တက်ရောက်ရန်နေကြသည်။
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန: tag ကိုကွန်ယက်
အမျိုးအစား: စာအုပ်များနှင့်အခါအားလျော်စွာ, သတင်းစာတွေ
Register မှဒီနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါနဲ့ Edit အိမ်ခန်းနှင့်
ထုတ်လွှင့်ဘိသည့် 2018 ၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ဖြစ်ပါတယ် NAB ပြရန် Las Vegas မှနှင့်များ၏ထုတ်လုပ်သူအတွက် NAB ပြရန် LIVE ။ ကျနော်တို့ 2018 ဖုံးအုပ်ထားပါသည် NAB ပြရန် အဆိုပါကာလအတွင်းရုပ်ရှင်သမားတွေနှင့်စာနယ်ဇင်းသမားများနှင့်အတူ NAB ပြရန် ထို့အပြင်တစ်ဦးပြပွဲနှင့်များမှာ NAB ပြရန် New York ကမီဒီယာမိတ်ဖက်။ နေဖို့နောက်ဆုံးပေါ်များအတွက်မဂ္ဂဇင်း Beat ထုတ်လွှင့်ရန်ညှိ NAB ပြရန် သတင်း!
မူပိုင် 2018 အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း, LLC Beat ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ ဤနေရာတွင်ပေါ်ထွန်းအားလုံးအမှတ်တံဆိပ်နှင့်မူပိုင်ခွင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြသည်။
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "ကို Creative & ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Directory ကို" ။ http://www.broadcastbeat.com/directory/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Facebook က 6.3Kပရိသတ်များ
Instagram ကို 8.4Kနောက်လိုက်
Youtube ကို 3.1Ksubscribers
LinkedIn တို့ connections
+ google နောက်လိုက်
My Posts 24Kစာတိုက်